२०७६ कात्तिक १५ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्गको काम सुस्त
प्रस, जीतपुर, १४ कात्तिक/ वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडकको कामले तीव्रता लिन सकेको छैन । सडक निर्माण शुरू भएको सवा दुई वर्षमा ६० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ । २०७३ असार २९ गते शुरू भएको यो योजना २०७५ पुस २८ गते (तीस महीना)भित्र पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर तोकिएको समयमा काम नभएपछि अहिले २०७७ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न अन्तिमपटक म्याद थप गरिएको छ । तोकिएको समयमा यथावस्था सरह काम भएको खण्डमा सम्पन्न हुने लक्षण देखिंदैन । जीतपुर–परवानीपुरको अतिक्रमण हटाइए पनि त्यहाँ निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । यसैगरी, पथलैयादेखि सिमरासम्मको सडकखण्डमा पनि खासै प्रगति देखिंदैन । कतैतिर मात्र चार लेनको सडक सम्पन्न भएको छ भने थप दुई लेनको सडक बनाउने कार्य भइरहेको छ । सिमरादेखि जीतपुर, परवानीपुर, गण्डक क्षेत्रसम्मको अवस्था कहालीलाग्दो छ । कतै पिच बनेको छ, कतै ग्रेभल बिच्छ्याइएको छ भने कतै काम नै शुरू भएको छैन । ६ लेन सडक निर्माणको लागि गण्डकदेखि पथलैयासम्म दुवैतर्पm नाला बनाएर सीमा निर्धारण गर्ने काम भने जोडतोडले भइरहेको छ । निर्धारित ठाउँमा पुनः अतिक्रमण नहोस् भनेर नाला निर्माणलाई त
बुनिलाल हत्या प्रकरणः प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ वीरगंज–१६ नगवा निवासी बुनिलाल चौरसियाको हत्या घटनाको अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । कात्तिक ७ गते बेलुकी भएको हत्याकाण्ड ८ गते दिउँसो सार्वजनिक भएदेखि शुरू भएको अनुसन्धानमा हत्याका योजनाकारमध्ये दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि मुख्य हत्यारालाई अभैmसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको र केही दिनमा घटना सार्वजनिक हुने पर्सा प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धानको कारण अहिलेसम्म प्रहरीले चौरसिया हत्याकाण्डबारेमा प्रेसलाई जानकारी गराएको छैन । अनुसन्धान भइरहेको छ, दुई/चार दिनमा तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले बताउँदै आएको छ । कात्तिक ७ गते बेलुकीपख चौरसियाको वीरगंज–६ माईस्थान मन्दिरपछाडि दीपककिशोर अग्रवालको घरमा हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ । हत्याको योजनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा प्रहरीले दीपक र निजकी पत्नी निधि अग्रवाललाई कात्तिक ८ गते बेलुका पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट हत्यामा निधिको संलग्नता देखिएको स्रोतले जनाएको छ । भारतको झारखण्डमा माइत रहेको निधिले त्यहीबाट सार्पसूटर ल्याएर हत्याको योजना बनाएको प्रा
६० हजार घूससहित प्रहरी अधिकृत पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रु ६० हजार घूससहित एकजना प्रहरी अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा अन्तर्गत रहेको गंजभवानीपुर प्रहरी चौकीका इन्चार्ज जटाशङ्कर साह कलवारलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो । कपडा तस्करीको लाइन खोलेको र नियमित रकम बुझ्नेक्रममा टोलीले कलवारलाई पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ । कलैया उपमनपा–४ मन्दिर चोकनजीक एउटा पसलबाट कलवारलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियार टोलीले जनाएको छ । यस विषयमा जिप्रका बाराका प्रमुख विकाशराज खनालले घटनाको पुष्टि गर्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका कलवारलाई अख्तियारले लगेको बताए ।
कारागारभित्र महिला कैदीबन्दीहरू छठव्रतको तयारीमा
विमला गुप्ता, वीरगंज, १४ कात्तिक/ तराई–मधेसको ठूलो चाडको रूपमा मानिने छठपर्वको लागि वीरगंज कारागारमा रहेका ३५ जना बर्तालु महिला कैदीबन्दीहरू व्रतको तयारीमा जुटेका छन् । विभिन्न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका बर्तालु कैदी महिलाहरू अहिले छठको तयारीमा निकै नै व्यस्त भएका छन् । परिवारबाट कोही भेट्न नआए पनि पति, सन्तानलगायत घरपरिवारको सुखशान्तिको कामना गर्दै उनीहरू छठ परमेश्वरीको आराधना गर्दैछन् । यता बर्तालु कैदीबन्दीहरूको धार्मिक आस्थालाई ध्यानमा राख्दै वीरगंज कारागारले पनि उनीहरूको पूजा व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याएको छ । विभिन्न अपराधमा सजाय भोगिरहेका महिला कैदीहरूको मनमा छठी माताको प्रकोपको अलग डर समाएको छ । पूजाको विधिमा कुनै गल्ती गरे छठीमाईले तुरुन्तै दण्ड दिने जनविश्वासको कारण कैदीजीवन भोगिरहेका बर्तालु महिलाहरू ससाना गल्तीहरूबाट पनि जोगिन खोज्दैछन् । अरू समय बर्तालु कैदी महिलाहरू जुनसुकै अवस्थामा बसे पनि अहिले भने आआप्mनो शारीरिक सफाइदेखि लिएर कारागारको सरसफाइमा विशेष ध्यान पु¥याइरहेका छन् । शुद्धता र पवित्रताको प्रतीकको रूपमा मनाइने छठ व्रतको मुख्य प्रसाद ठेकुवा, खीर र पुड
अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट गुप्ता घाइते
प्रस, रौतहट, १४ कात्तिक/ अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट एकजना भारतीय नागरिक घाइते भएका छन् । मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले बुधवार राति गौर–२ निवासी ४० वर्षीय विजय गुप्तालाई गोली हानेर फरार भएका थिए । घाइते गुप्ताको गौर अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि वीरगंज पठाइएको छ । भारत, शिवहर निवासी गुप्ता व्यापारी हुन् र उनलाई अज्ञात समूहले पेटमा गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जनाएको छ ।
छाला उद्योगका सञ्चालकसहित दुईजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ हिमालय छाला कारखानाले श्रीसिया नदीमा प्रदूषित पानी फालेको उजूरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले उद्योगका सञ्चालक र मैनेजरलाई पक्राउ गरेको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२३ भलुहीस्थित हिमालय छाला कारखानाले छाला प्रशोधन गरी निस्किएको रसायनयुक्त प्रदूषित पानी चोर्नीस्थित श्रीसिया नदीमा बगाएपछि सो नदीको प्रदूषणबाट दिक्क भएका स्थानीयले उजूरी गरेका थिए । स्थानीयको उजूरीपछि प्रहरीले पटकपटक कारखानाका सञ्चालकलाई फोहरजन्य पानी नदीमा नमिसाउन निर्देशन दिएपनि कारखानाले अटेर गरेपछि प्रहरीले उद्योगका सञ्चालक चिनियाँ नागरिक लिउता छुवाङ्ग र भारत घर भई मकवानपुर बस्ने कारखानाका मैनेजर तिनजुङ्ग गुरुङलाई पक्राउ गरेको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ ।
काठमाडौं गोल्डकपको उपाधि युवा समाजलाई
प्रस, सेढवा, १४ कात्तिक/ जीराभवानी गाउँपालिकामा सञ्चालित प्रथम काठमाडौं गोल्डकपको उपाधि युवा समाज पकडीटोलाले हात पार्न सफल भएको छ । युवा समाजले जनजागरण क्लब ब्रह्मनगर ठोरी–३ लाई ० का विरुद्ध २ गोलले पराजित गरेको थियो । युवा समाजका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मेक्सवेलले दुई गोल गरेका थिए । मेक्सवेलले ३०औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दा जनजागरणका खेलाडी अफसाइड बल गोल गरेको आरोप लगाउँदै खेल रोकेका थिए । खेलको निर्णायकमण्डलले नै पक्षपात गरी खेल खेलाएको आरोप लगाउँदै जनजागरण ठोरीका खेलाडीहरू चौरबाट बाहिरिएका थिए । खेलको निर्णायकमण्डलमा रियाज असलम, लखन चौधरी, सानु मगर र राजकिशोर चौधरी रहेका थिए । करीब आधा घण्टाको विवादपछि हार स्वीकार गर्दै खेल नखेल्ने सहमति भएपछि युवा समाज पकडीटोला विजेता घोषित भएको थियो । विजेता टिम युवा समाजलाई प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद जयप्रकाश थारूले प्रथम पुरस्कार सत्तरी हजार रुपैयाँको चेक तथा ट्रफी वितरण गरेका थिए । आजको खेलको म्यान अफ दि म्याच तथा सिरिज विजेता टिमका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मेक्सवेल घोषित भए । महावीर युवा स्पोट्र्स क्लब काठमाडौंद्वारा आयोजित खेल समापन
शर्मालाई अमेरिकामा स्वर्ण पदक
प्रस, पथलैया, १४ कात्तिक/ अमेरिकाको न्युजर्सीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मार्शल आर्ट खेलमा बाराका दिनेश शर्माले स्वर्णपदक जितेका छन् । सिनियर उमेर समूहको फाइनलमा शर्माले अमेरिकाका एन्ड्रिउ सुतेलाई ५–४ ले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका हुन् । न्युजर्सीमा अक्टोबर २५ देखि २७ सम्म भएको प्रतियोगितामा स्वर्णपदक जितेका शर्मा नेपाल राष्ट्रिय मार्हल आर्ट गेम्स महासङ्घका महासचिवसमेत हुन् । तेक्वान्दोका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी शर्मा निजगढ नगरपालिका–३ सिंगौल निवासी हुन् । उनी नेपाल तेक्वान्दो महासङ्घका अध्यक्षसमेत हुन् । तेक्वान्दो खेलको प्रशिक्षकको रूपमा व्यस्त रहँदै आएका शर्माले लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । शर्माले यसअघि नेपालका लागि थुप्रै देशका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै पदक हात पारेका छन् । यसैगरी, शर्माले मार्शल आर्टको प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत हात पारेका छन् । अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने लिजेन्ड अफ दि मार्शल आर्ट हल अफ फेममा शर्मालाई “एक्स्ट्रा अर्डिनरी मास्टर इन्ट्रक्टर” अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो । मार्शल आर्टको वि
छठमा वीरगंज र पोखरिया बजार गुलजार
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ दशैं–तिहारको तुलनामा वीरगंज बजार छठमा गुलजार भएको छ । जीतपुर, परवानीपुरलगायत राजमार्ग बजार क्षेत्र ६ लेन सडक निर्माण कार्यले तोडफोड भएपछि यस वर्ष वीरगंज बजार छठ पर्वमा गुलजार भएको हो । वीरगंज बजारमा भाइटीकाको भोलिपल्टदेखि किनमेल गर्नेहरूको सङ्ख्या एक्कासि बढेको हो । विपी पार्कमा रहेको हड्ढङ बजार, ब्यारेकनजीकको विशाल बजारदेखि घण्टाघरदेखि आदर्शनगरसम्मका पसलहरूमा नयाँ कपडा, छठ पूजा सामग्री खरीद गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । व्यापारीहरूले दशैं र दीपावलीमा भएको बिक्रीभन्दा बढी यसपटक छठमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वीरगंजभन्दा बढी रक्सौलमा किनमेल गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू रक्सौलमा किनमेल गर्न गएका कारण त्यहाँ भीड हुने गरेको हो । रक्सौलको तुलना यसपटक वीरगंजमा पनि ग्राहकहरूको भीड बढी देखिएको छ । यसको एउटै कारण यसअघि बारा, पर्साका मानिसहरू परवानीपुर, जीतपुर बजारमा केन्द्रित हुने गरेकामा त्यहाँको बजार क्षेत्र सडक फराकिलो गर्नेक्रममा तोडफोड भएपछि त्यहाँका ग्राहकहरू वीरगंज आएका हुन् । पोखरिया बजारमा भीड पर्सा जिल्लाको दोस्रो
दुई पक्षबीच झडप, ९ जना पक्राउ
प्रस, परवानीपुर, १४ कात्तिक/ बहुदरमाई नगरपालिका–४ बहुअर्वामा दुई पक्षबीच कुटाकुट हुँदा चारजना घाइते हुनुका साथै ९ जना पक्राउ परेका छन् । सोही ठाउँका शिव कुशवाहा र राहुल कलवार समूहबीच कुटपिट भएको हो । कुटपिटमा परी शिव कुशवाहाका बुबा राजदेव कुशवाहा गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको टाउकोमा चोट लागेपछि न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने दीपेन्द्र कुशवाहा, रवि गुप्ता, राहुल गुप्ता, पारस कलवार सामान्य घाइते भएका छन् । पर्सा प्रहरीको टोलीले घटनाको सम्बन्धमा दुवै पक्ष गरी ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रवि गुप्ता, पारस गुप्ता, अमिरी गुप्ता, राहुल गुप्ता, परशुराम कलवार, दीपक गुप्ता, सञ्जीव साह, वीरेन्द्र साह र बलिराम साह छन् ।
यस वर्ष पनि छठमा श्रीसिया नदी गन्हायो
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ बर्सेनि छठको बेलामा गन्हाउने श्रीसिया नदी यसपटक पुनः छठकै बेलामा केही सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूलाई गन्हाउन थालेको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि पर्सा, बाराको औद्योगिक प्रदूषणको शिकार भएको श्रीसिया नदी अहिलेसम्म छठको बेलामा मात्र गन्हाउँदै आएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पनि छठकै बेलामा श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त गराउन पहल शुरू गर्छ भने सङ्घसंस्थाहरूलाई पनि छठअघि र पछि श्रीसिया नदी गन्हाउँदैन र त्यसविरुद्ध कुनै पहल पनि गर्दैनन् । गत वर्षको छठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले श्रीसिया नदीमा प्रदूषण बढेको सन्दर्भमा पहल गरेको थियो । तर त्यसपछिको अवधिमा उसको सक्रियता देखिएन । छठ पूजा शुक्रवारदेखि शुरू हुने भएको छ भने श्रीसिया नदीको प्रदूषणमा पनि केही सङ्घसंस्थाले चासो देखाएका छन् । श्रीसिया नदी एवं वीरगंज प्रदूषणमुक्त अभियान पर्साले बिहीवार नगरप्रमुख विजय सरावगीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख सरावगीले श्रीसिया नदी प्रदूषणविरुद्ध महानगरपालिकाले अभियान चलाउने आश्वासन दिए । उनले छठपछि श्रीसिया नदीको सन्दर्भमा सम्बन्धित वड
वडाध्यक्षद्वारा छठ व्रतालुलाई सहयोग
प्रस, जीतपुर, १४ कात्तिक/ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष्F रामबाबू गुप्ताले छठ व्रतालुहरूलाई कपडा, पूजा सामग्रीसहित नगद वितरण गरेका छन् । हरेक वर्ष वडाध्यक्ष गुप्ताले आर्थिक समस्या भएका छठ व्रतालुहरूलाई सहयोग गर्दै आएकोमा यस वर्ष पनि साडी, पूजा सामग्री, चिनी, मीठासहित नगद वितरण गरेका हुन् । वडाध्यक्ष गुप्ताले शुक्रवार एक सय एकजना छठ व्रत गर्ने गरीब महिलाहरूलाई सामग्री वितरण गर्ने जानकारी गराउँदै उनले भने– मेरो निवासमा आउने कुनै पनि छठ व्रतालुहरू रित्तो हात फर्काउदिनँ । उनले छठीमाताको कृपाले १४ वर्षदेखि आर्थिक समस्या भएका छठ व्रतालुहरूलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । ग्यास सिलिन्डर र चुलो वितरण प्रस, पोखरिया/ छिपहरमाई गाउँपालिकाले छठपूजाको अवसरमा ग्यास र चुलो वितरण गर्ने अभियान शुरू गरेको छ । हिजो बुधवार छिपहरमाई गापा–३ तुलसीबर्वामा ३४५ घरपरिवारलाई छठको अवसरमा ग्यास चुलो र सिलिन्डर वितरण गरेको थियो भने बिहीवार वडा नं. ५ मा ३८२ घरपरिवारलाई ग्यास चुलो र सिलिन्डर वितरण गरिएको वडाध्यक्ष मौजीलाल साह कानूले बताए । गापा प्रमुख मनोजकुमार गुप्ताले छठपूजा गर्ने घरप
सिम्रौनगढ किसानहरूको आन्दोलनको भूमि
प्रस, सिम्रौनगढ, १४ कात्तिक/ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गोपाल वंशावलीपछिको पुरानो इतिहास बोकेको ठाउँ सिम्रौनगढ रहेको बताएका छन् । सिम्रौनगढ नपा–९ कचोर्वास्थित पारसनाथ महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा नेपाल शहीद प्रतिष्ठान कचोर्वाले आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले सिम्रौनगढको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सिम्रौनगढ किसानहरूको आन्दोलनको भूमि रहेको बताउँदै यहाँबाट कमरेड हरिहर यादवको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन शुरू भएको बताए । नेता नेपालले स्वतन्त्रता सेनानी अनुप सहनीलगायतको जीवनी लेख्न आवश्यक रहेको बताए । नेता नेपालले निजगढ फास्ट ट्र्याक, हवाई मैदान, हुलाकी सडकलगायत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्ष्Fाको बारेमा मन्तव्य राखेका थिए । नेपाल शहीद प्रतिष्ठान कचोर्वाका गोपाल ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, स्वतन्त्रता सेनानी अनुप सहनी, समाजवादी पार्टीका नेता रामेश्वर यादव, छठु यादव, अशोक जयसवाललगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन बच्चा यादव र स्वागत भोजेन्द्र य
वीरगंजमा राजेश हमाल आउँदै
प्रस, परवानीपुर, १४ कात्तिक/ वीरगंजमा नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता राजेश हमाल आउने भएका छन् । कात्तिक २२ गते गृष्मा ब्रोडकास्टिङद्वारा घण्टाघरमा निश्शुल्करूपमा आयोजना गरिने सप्तरङ्ग–२ कार्यक्रममा उनले आप्mनो प्रस्तुतिका साथ सहभागी हुन आइरहेको आयोजकले जनाएको छ । होटल भिस्वामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सप्तरङ्ग–२ का संयोजक गेहेन्द्र घिमिरेले केही वर्षदेखि पर्यटन प्रद्धर्धन र समुन्नतिका लागि सातवटै प्रदेशमा आयोजना हुँदै आएको यो कार्यक्रम यस वर्ष कात्तिक २० गतेदेखि प्रदेश १ को बिर्तामोड, कात्तिक २२ गते वीरगंज, २४ गते चितवन, २६ गते नेपालगंज, २८ गते सुदूरपश्चिमको सुर्खेत, ३० गते महेन्द्रनगर र मङ्सिर ३ गते पोखरामा कार्यक्रम राखिएको छ । एउटा शहरमा एउटा कार्यक्रमको लागि करीब रु १४–१५ लाख लागत लाग्ने आयोजकले जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल टेलिकमलगायत प्रायोजकबाट आयोजकले सहयोग लिई कार्यक्रम गर्दैआएको र आम्दानी जति सामाजिक काममा खर्च गर्ने गरेको दाबी गरेको छ । यस वर्ष वीरगंजको कार्यक्रमबाट हुने आम्दानी तेजाब प्रहारबाट घाइते मुस्कान खातुनको उपचारमा खर्च गरिने बताइएको छ । साथै
समृद्ध नेपालको बाधक गरीबी
शीतल महतो नेपालको मुख्य र प्रमुख समस्या भनेको गरीबी र विपन्नता नै हो । नेपालको २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५३–५४ ले गरीबी ४१.८ प्रतिशत देखाएको थियो । झन्डै १६ वर्षपछि गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणले गरीबी घटेर २५.२ प्रतिशत देखायो । यस हिसाबले देशको गरीबी हरेक वर्ष १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखाएपनि आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा त्यति सुधार गर्न सकेको छैन । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष १ हजार ४७ डलर पुगेको छ, जुन तोकिएभन्दा कम हो । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलरभन्दा माथि पु¥याउनुपर्छ । यही कमजोर प्रगतिका कारण नेपालले आपूmलाई विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न यस अघि तोकेको सन् २०२१ को समय सीमा केही वर्ष पछाडि सार्न गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरिसकेको छ । गरीबीको प्रतिशतमा सुधार आए पनि अझै एक चौथाई जनता गरीबीको रेखामुनि छ । विश्व बैंकले सन् २०१० मा सार्वज
के ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटक आउला ?
विश्वराज अधिकारी सन् २०२० लाई नेपालले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ (ख्ष्कष्त ल्भउब िथ्भबच द्दण्द्दण्) को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । साथै उक्त भ्रमण वर्षमा विभिन्न मुलुकका करीब २० लाख पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने लक्ष्य राखेको घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य त छ नै, यस्तो निर्णय गर्नु अनिवार्य पनि थियो । दुई ठूला आर्थिक महाशक्तिहरू–भारत र चीनबीच रहेको नेपालले वस्तु–व्यापार (निर्यात) बाट उच्च लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ । भारत र चीन बृहत् बजार भए तापनि यी राष्ट्रहरूमा विभिन्न वस्तु निर्यात गरेर नेपालले उच्च लाभ प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने भारत र चीनभन्दा सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि, सीप र क्षमता नेपालसँग छैन । उत्पादन प्रवधिको विकास एवं प्रयोग र कच्चा पदार्थ उत्पादन, यी दुवै क्षेत्रमा भारत र चीनभन्दा नेपाल निकै पछाडि छ । प्रायः हरेक वस्तु भारत र चीनले नेपालभन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । यी दुई छिमेकी बृहत् बजारलाई केही गिनेचुनेका वस्तुहरू बिक्री गरेर नेपालले न्यून लाभ प्राप्त गर्नु बेग्लै कुरा हो ।
प्रस, कलैया, १४ कात्तिक/ तिहार बिदापछि सञ्चालनमा आएका कलैयाका बैंकहरूमा बिहीवार ग्राहकहरूको भीड लाग्यो । बैंकमा रकम निकाल्ने, जम्मा गर्ने तथा पठाउनेहरूको भीड लागेको थियो । दीपावलीको बिदा एक दिन लम्बिएको कारण ग्राहकहरूको भीड बढेको बैंकले जनाएको छ । बैंकसरह सहकारीहरूमा पनि भीड बढेको थियो । बैंकमा सहकारी संस्थाहरूले नगद जम्मा गर्न खुद्रा ५, १०, २० र ५० रकम लिएर आएका कारण सेवामा ढिला हुन गएको बैंक कर्मचारीले बताए । अर्कोतर्पm सर्वसाधारणहरूमा इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल बैंकिड्ढो पहुँच नपुगेकोले पनि बैंकमा लामो लाम लागेर सेवा लिन बाध्य भएको एकजना ग्राहकले बताए ।
छठ पर्व विधिवत् शुरू
विमला गुप्ता, वीरगंज, १४ कात्तिक/ तराईवासीको ठूलो चाडको रूपमा मनाइने छठ पर्व शुक्रवारदेखि विधिवत् शुरू भएको छ । कठोर व्रतको रूपमा मनाइने छठ व्रत कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिबाट विधिवत् शुरू भई सप्तमी तिथिमा बिहान भगवान् सूर्यलाई अघ्र्य दिएर समाप्त हुन्छ । चार दिनसम्म चल्ने पर्वको चतुर्थी तिथिबाट विधिवत् शुरू भएको दिनलाई भोजपुरी भाषामा नहाए खाए अर्थात नुहाएर खानु भनिन्छ । नहाय खायको दिन छठैतिन महिलाहरू आँपको दतिउनले मुख धुने, हातखुट्टाको नङ्ग काट्ने र नुहाएर मात्र शुद्ध साŒिवक भोजन ग्रहण गर्छन् । आज ब्रतालुले लसुन, प्याज र मसुरोको दाल विनाको शुद्ध साŒिवक भोजन खाने गर्छन् । जसमा अगहनी चामलको भात, अरहर अथवा चनाको दाल, लौकाको तरकारी र तोरीको साग अनिवार्य खानुपर्दछ । कठोर व्रतको रूपमा मनाइने यस पर्वमा बर्तालु महिलाहरू नहाय खायको दिनदेखि शारीरिक शुद्धताको ख्याल गरी ब्रह्मचार्यको समेत पालना गर्छन् । नहाय खायको दिनदेखि छठीमाईको घरमा आगमन हुने धार्मिक मान्यता अनुसार आजदेखि छठ सम्पन्न नभएसम्म घरका अन्य सदस्यहरू पनि शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्छन् । छठको दोस्रो दिन शुक्ल पक्षको पञ्च
सुशासनप्रति गम्भीरताको खाँचो
श्रीमन्नारायण तथ्य र तर्कहीन कुरा गरेर देशभित्रका प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्ता, स्वतन्त्र विश्लेषक तथा सर्वसाधारण जनतालाई अन्योलमा राख्न सकिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बढी लामो समयसम्म अँध्यारोमा राख्न सकिंदैन । नेपालका प्रायः सबैजसो सरकारहरूले आपूmलाई सुशासनको पक्षधर तथा भ्रष्टाचारविरोधी दाबी गर्दै आएका छन् तर धरातलीय यथार्थ अर्कै रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आप्mनो काम तीव्र बनाएको दाबी गरेपनि उपलब्धि भने त्यस्तो देखिएको छैन । विभागमा उजूरी परे अनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेक्रममा तीव्रता आउन सकेको छैन । विभागले आक्रामकरूपमा काम गर्न नसक्दा र ठूला केसमा मुद्दा दायर गर्नेक्रम बढाउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को रेटिङमा ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ, जुन कि हाम्रोनिम्ति राम्रो सङ्केत होइन । वर्तमान अवस्थामा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकहरू मात्रै ‘ग्रे’ लिस्टमा छन् । कमोवेश उपरोक्त तीनवटै देश विश्व समुदायबाट एक्लिएको अवस्थामा छन् । सरकारका मन्त्रीहरू ठूला एवं आकर्षक कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्नुभन्द
छठ ः दलितोत्थानको अवसर
नेपालमा मनाइने चाडहरूमध्ये छठ विशुद्धरूपमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिने चाड हो । माटाका भाँडा, बाँसका सामग्री, साठी धान, उखुलगायत चीजबीज सबै स्थानीय उत्पादन हुन् । तर निराशाजनक अवस्था के छ भने यी सामग्री खरीद गर्न पनि भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीड लाग्छ । देशका नीतिकारहरूले चाडहरूको आग्रहलाई आर्थिक दृष्टिकोणले हेरेर त्यससँग सम्बद्ध पेशाकर्मीहरूलाई नयाँ प्रविधितर्पm आकर्षित गराएर उत्पादनमा विशिष्टता दिने नीति ल्याउने हो भने छठ पर्वमा मात्र सीमित रहने उनीहरूको उत्पादनले सार्वकालिक मात्र होइन, सार्वजनिक उपयोगको अवसर पाउने थियो । तर हामी यथास्थितिमा रमाउँछौं । जसले जे गर्छ त्यसमा उसको नियति र भाग्य जिम्मेदार हुन्छ भन्ने रुग्ण सोचले गाँजेकोले हस्तकलाको विशिष्टीकरण र विस्तारीकरणमा हाम्रो ध्यान जानै सकेको छैन । नतीजा के भइरहेको छ भने छठ पर्व समाप्त भएपछि छैंटी–ढक्की बनाउनेहरूको रोजगार ठप्प हुन्छ । दीपावली र छठ समाप्त भएपछि कुमालेहरूको दियो, माटाका सरसामान बनाउने धन्दा बन्द हुन्छ । विशिष्टीकरण आजको बजारको माग हो । कुनै पनि परम्परागत उपभोग्य वस्तुलाई विशेषरूपले अझ सुविधाजनक हुनेगरी त
२०७६ कात्तिक १४ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
महानगरको सफाइ टोली ग्रामीण भेगमा पुगेन
प्रस, परवानीपुर, १३ कात्तिक/ दीपावली र छठमा वीरगंज महानगरपालिकाको सरसफाइ संयन्त्र ग्रामीण भेगका वडाहरूमा निष्क्रिय देखिएको छ । सरसफाइको ठेक्का लिएको चितवनको पृथ्वी तारा कन्ट्रक्शन प्रालिले महानगरपालिकाभरि सरसफाइ गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाको ३२ वडामध्ये ग्रामीण भेगका १६ वटा वडामा सरसफाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनी नपुगेको त्यहाँका बासिन्दाहरूले गुनासो गरेका छन् । पहिलेको १९ वटालाई मर्ज गरेर १६ समेतमा गाडी र सयौ सरसफाइकर्मी खट्ने गरे तापनि ग्रामीण भेगमा महीनामा दुईपटकमात्र फोहोर उठाउने गाडी र दुईजना सफाइकर्मी उपलब्ध गराएको छ । सरसफाइको ठेक्का पाएको कम्पनीले ग्रामीण भेगका वडाहरूमा सरसफाइ नगर्दा फोहोरको डुङ्गुर र त्यसबाट उत्सर्जित दुर्गन्धले स्थानीय बासिन्दा पीडित बनेका छन् । महीनामा दुईपटक गाडी आयो भने १५ दिनमा थुुपारिएको फोहोरले रोग–सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरासमेत बढ्दै गएको छ । समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूको गाउँ–टोलमा ठेकेदारले बढी ध्यान दिने गरेको र अन्य पार्टीबाट निर्वाचित वडाहरूको सरसफाइमा ध्यान नदिएको निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन् । फोहोरमैला उठाउन
ईष्र्या–द्वेष बिर्सेर मिलिजुली चाडपर्व मनाउन आग्रह
प्रस, परवानीपुर,१३ कात्तिक/ प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज निज निवासमा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । बुधवार बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म चलेको कार्यक्रममा परवानीपुर गाउँपालिका–१ बुनियाद, २ रामपुरमुसहरी, ३ लिपनी, ४ चैनपुर, ५ बुहअरी, वीरगंज–२१ लिपनीबिर्ताको परवानीपुर र पटेलनगरका विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा तथ जेष्ठ नागरिक थिए । भेटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने उदेश्यले सो कार्यक्रम गरिएको मन्त्री सोनलले बताए । उनले वर्षमा आउने विशेष पर्व दशैं, दीपावली र छठको अवसरमा आप्mनो गाउँठाउँका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र आपसी सम्बन्ध अझै प्रगाढ गर्न विगत केही वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको बताए कार्यक्रममा बोल्दै बारा क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एकबाल मियाँले चाडपर्व आस्थाको प्रतीक र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सहयोग गर्ने माध्यम भएकोले ईष्र्या डाहा बिर्सेर सबै मिलेर चाड मनाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा जेष्ठ नगरिकहरूलाई सम्मान पनि प्रकट गरिएको थियो । कार्यक्रममा परवानीपुर गाउँपालिकाका अध
राजमिस्त्रीहरू आर्थिक समस्या झेल्दै
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकिएको कारण अहिले घरनिर्माण कार्यमा संलग्न हजारौं मिस्त्री र मजदूर आर्थिक समस्या झेल्दै आएका छन् । सरकारले असारदेखि असोजसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउने गरेको र त्यसपछि उत्खनन गर्न छुट दिएपनि यसपटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्ष्Fण रिपोर्ट अहिलेसम्म नआउँदा असोज बितिसक्दा पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुन नसकेको हो । परीक्ष्Fण रिपोर्ट आउन अझै एक महीना लाग्ने प्रFविधिकहरू बताउँछन् । बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको अभावमा पर्सा जिल्लामा घरनिर्माणको काम प्रभावित भएको छ । दैनिक हजारौं मानिसको संलग्नता हुने घरनिर्माण कार्य ठप्प हुँदा उनीहरू चार महीनादेखि आर्थिक समस्या झेल्दै आएका छन् । वीरगंज, माईस्थानमा घरनिर्माण कार्यमा खट्ने दैनिक ज्यालादारीका सयौं मजदूर बिहान आउने र काम नपाई फर्कने गरेको बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिएकोले उनीहरूको रोजगार प्रभावित भएको हो । भारतको आदापुरलगायत क्ष्Fेत्रबाट माईस्थानमा सयौंको सङ्ख्यामा मजदूर दैनिक ज्यालादारीको लागि आउने गरेकोमा अहिले उनीहरूको सङ्ख्या पातलिएको छ । चार महीनादेखि काम कम भएक
कुश्ती प्रतियोगिता सम्पन्न
रवीन्द्रप्रसाद साह, कलैया/ बारा, विश्रामपुर गाउँपालिका–३ मुसहर्वामा तिहारको अवसरमा कुश्ती प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका प्रमुख अमीरीलाल पालको अध्यक्षता एवं भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंजका रमेश चतुर्वेदीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका नामी पहलवानहरूको सहभागिता थियो । कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेशराय यादव, महागढीमाई नगरपालिका मेयर उपेन्द्र यादव, परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण साह, पकहामैनपुर गाउँपालिका अध्यक्ष विजय चौरसिया, नेपाल तरुण दल, बाराका अध्यक्ष लोकेश सिंह, मेला समितिका अध्यक्ष एवं वडा अध्यक्ष शिवचन्द्र यादवलगायतको कार्यक्रममा सहभागिता थियो ।
श्रीसिया नदीमा प्रदूषण रोक्न सांसद यादव नेतृत्वको टोलीद्वारा अनुगमन
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ तराईको मुख्य पर्व छठपर्वलाई मध्यनजर गर्दै श्रीसिया नदीको प्रदूषण रोक्न सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुगमन गरेको छ। मेयर विजय सरावगी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, प्रनाउ गौतम थापाको टोलीले बारा, पर्सा करिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई छठ अगावै फोहर पानी नदीमा विर्सजन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । अनुगमनको क्रममा आठवटा उद्योगले सबैभन्दा बढी नदीलाई प्रदूषित गरेको र त्यसमा छाला उद्योग रहेकोले छाला उद्योगलाई तत्काल प्रदूषण विर्सजन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । उद्योगको प्रदूषणको कारण श्रीसिया नदी निकै फोहर भएको र खोलाको पानी सफा बनाउन गृह कार्य भइरहेको अनुगमनको क्रममा सांसद यादवले बताए । पटक–पटक उद्योगीहरूलाई वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्न भनेपनि अटेर गरेकाले अब कुनै हालतमा नछाड्ने सांसद यादवले बताए । उद्योग स्थापना गर्दा स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराए पनि अहिलेसम्म उद्योगीहरूले अटेर गर्दैआएका छन् । छठ पर्वको समयमा मात्र पानी सफा भएर हुँदैन, श्रीसियामा सफा पानी बग्नु
दलित बस्तीमा साडी वितरण
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ रुँगटा वेलफेयर सोसाइटीको आयोजना र सांसद प्रदीप यादवको सक्रियतामा दलित बस्तीमा निश्शुल्क साडी वितरण गरिएको छ । सांसद यादवले एक कार्यक्रमबीच वीरगंज–३१ कोन्हिया, लक्ष्मीपुर, कटगेनवा गाउँका दलितहरूलाई छठ सामग्री तथा कपडा वितरण गरेका थिए । सोसाइटीका सुरेश रुँगटाको सभापतित्वमा शुरू भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जन्नत अंसारी, नेता सुन्दर कुर्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।
छठपर्व व्यवस्थित मनाउन छलफल
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ पर्साका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छठघाटको निरीक्ष्Fण गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न थालेका छन् । छठ व्रतालुहरूलाई विद्युत्, पानी तथा सरसफाइ, टेन्ट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने विषयमा स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगीले आज सुगौली, अलौ, बजारटोल, बुढियामाई, कोन्हिया, श्रीसिया, विन्दवासिनीको निरीक्ष्Fण गरेका थिए । निरीक्ष्Fणको क्रममा सामान्य समस्या आएमा सहयोग गर्ने जानकारी गराएका थिए । बाटोघाटो बिग्रिंदा नगरपालिकाको जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट काम भइरहेको मेयरका राजनीतिक सल्लाहकार मुकेश द्विवेदीले जानकारी गराएका छन् ।
महँगीका कारण छठपर्व मनाउन धौं–धौं
प्रस, पचगावाँ, १३ कात्तिक/ महँगीका कारण पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–४ सुगौली र भतौडा नयाँ बस्तीका दलित परिवारलाई छठ पर्व मनाउन धौधौ भएको छ । सो स्थानका मुसहर, दुसाद, चमार तथा गरीब दलितहरूले महँगीको कारण छठ पूजाको सामग्री किन्न सकेका छैनन् । महँगीले गर्दा कोशी भर्ने सामग्री, व्रतालुहरूका लागि नयाँ वस्त्र, दउरा, सुपुली तथा अन्य सामग्री किन्न नसकेको वडा ४ की पूmलमतिदेवी मुसहरिनले बताइन् । दिनभरि कमाएर बिहान–बेलुका छाक टार्र्नमात्र सक्ने हैसियतका मानिसले कसरी पर्व मनाउने उनले दुःखेसो पोखिन् । ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी पूmलमती देवी वर्षमा दुईपटक छठ पर्व मनाउँछिन् । यस वर्ष महँगी बढेकोले छठ सामग्री किन्न नसकेको उनले बताएकी छन् ।
छठ पूजाका लागि नेपालीहरूको भारतीय बजारमा भीड
प्रस, सेढवा १३ कात्तिक/ तराईको महान् पर्व छठ शुरू भएसँगै सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताहरूको भीड लागेको छ भने नेपाली बजार सुनसान देखिएका छन् । सिक्टा, मैनाटाड, इनर्वा तथा भंगहा लगायत भारतीय बजारहरू नेपाली उपभोक्ताले खचाखच भरिन थालेको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी ग्रामीण उपभोक्ताहरू किनमेलका लागि भारतीय बजार पुग्न थालेका छन् । उपभोक्ताहरूले पर्वका लागि लुगाफाटा, चिनी, सख्खर, नरिवल, तेल, घीउ तथा छठ पर्वमा प्रयोग गरिने माटाका भाँडा, बाँसका विभिन्न सामानलगायत पाठपूजाका सामग्री खरीद गर्न भारतीय बजार पुगेका जीराभवानी गाउँपालिका–३ का उमाशङ्कर चौधरीले बताए । नेपाली बजारभन्दा त्यहाँ सामानहरू सस्तो हुने पाइने भएकोले पनि उपभोक्ताहरू यी भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएका उपभोक्ताहरू बताउँछन् । अन्य समयमा सीमामा खटेका नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी, भारतीय उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा अनावश्यक दुःख दिने गरेता पनि यस पर्वको बेला कुनै रोकटोक नगर्दा उपभोक्ताहरूलाई सजिलो भएको गाउँलेहरूको भनाइ छ । तर भारतीय बजारमा पर्व तथा दैनिक उपभोग्य सामान खरीद गर्दा सरकारले तोकेको दररेटभन्दा ३ देखि ५ रुपियाँ
आर्थिक नगरीमा उल्लासमय किसिमले दीपावली मनाइयो
प्रस, परवानीपुर, १३ कात्तिक/ आर्थिक नगरी वीरगंज दीपावलीको दिन धपक्कै बलेको थियो । पोहोर–परार भन्दा पनि यसपालि हषोल्लासको साथ सबैले दीपावली मनाएका छन् । घरघरमा दियो बाली, विशेष पूजा आराधना गरी वीरगंजवासीले दीपावली मनाएका छन् । धनतेरसको दिनदेखि वीरगंजमा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट एउटा दियो बालेर दिपावली गरियो भने आइतवार साँझ झिलीमिली पारी पर्सा–बारामा दीपावली गरियो । साँझ ५ बजे पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदीप यादवको पहलमा समाजवादी पार्टीले मधेस आन्दोनलका शहीदहरूको सम्मानमा पहिलो दियो बालेर आप्mना कार्यकर्ताहरूलाई घरघरमा दीपावली शुरू गर्ने आग्रह गरेका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरूले भगवती लक्ष्मीको विशेष पूजा आराधना गरी घरघरमा दीपावली मनाएका थिए । ग्रीनसिटी बन्यो सङ्गमस्थल आदर्शनगर ग्रीनसिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको क्षेत्रले यसपालि पनि वीरगंजवासीको मन जित्यो । दीपावलीमा राम्रो रमाइलो गर्ने ठाउँ नहुँदा विगतमा वीरगंजका बासिन्दा हेटौंडा, पोखरा, काठमाडौं वा अन्त्य गएर दीपावली मनाउने गर्थे । आन्तरिक पर्यटकलाई रोक्न र वीरगंजमा धुमधामका साथ दीपावली मनाउन क
नेवार समुदायले बुधवार पनि भाईटीका लगाए
माधव तिमल्सिना, ठोरी, १३ कात्तिक/ ठोरीमा बसोवास गरेका नेवार समुदायले आज भाइटीका मनाएका छन् । हिजो कात्तिक १२ गते भाइटीका नलगाएका ठोरीका अधिकांश नेवार समुदायका व्यक्तिले आजमात्र भाइटीका मनाएका हुन् । हिजो नेवार समुदायको मौलिक साल नेपाल संवत् ११४० परेको र आज मात्र किजा पूजा परेकोले आजकै दिनमा भाइटीका लगाइएको नेवार समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् । आज भाइटीका लगाउनुपर्ने भएकोले हिजो साँझ म्हः पूजा अर्थात् आत्म–पूजासमेत गरिएको नेवा खलः ठोरीका अध्यक्ष राम बहादुर श्रेष्ठले बताए । नेवारी भाषामा किजाको अर्थ भाइ हो । रेडियो विजयबस्तीका अध्यक्षसमेत रहेका नेवार समुदायका अगुवा सन्तोष श्रेष्ठले बताए । किजा पूजामा दाजुभाइ दिदीबहीनीले एकअर्कालाई अक्षता, अबीर, दही, चिउरा र पानी राखेको रातो टीका लगाइदिने चलन रहेको उनले जानकारी दिए । आजको दिन दाजुभाइ र दिदिबहिनीले एकअर्काको दीर्घायुको कामना गर्दै गच्छेअनुसार सगुन, उपहार आदि दिने चलन रहेको श्रेष्ठले बताए । ठोरीका अधिकांश नेवार समुदायले हिजो म्हः पूजा गरेर आज भाइटीका लगाएको भएपनि तिथि विवादका कारण नेवार समुदायका केही व्यक्तिले हिज
व्यावहारिकता र चाडपर्व
सञ्जय साह मित्र तराई–मधेसमा मनाइने वर्षभरिका चाडपर्वहरूलाई व्यावहारिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने ती पर्वहरू जीवित छन्, जसको आर्थिक सम्बन्ध समाजमा बलियो भएर आयो । जुन पर्वको आर्थिक सम्बन्ध कमजोर भयो, बिस्तारै लोप हुँदै गयो । यस अर्थमा चाडपर्वको जीवन अर्थसँगसमेत जोडिएको हुन्छ । हामीकहाँ मनाइने अधिकांश पर्व आस्थासित जोडिएका छन् । आस्थासित जोडिएका, धर्म–कर्मसित गाँसिएका तथा अन्धविश्वासले भरिएका चाडपर्वहरूमात्र हाम्रो समाजमा छ भन्ने एकथरीको मत र हाम्रा अधिकांश चाडपर्वको बाह्य स्वरूप धार्मिक वा आध्यात्मिक वा अन्धविश्वासयुक्त जुन कुनाबाट हेरिन्छ, त्यस्तै देखिने प्रकृतिको रहे पनि अन्तरमा भने वैज्ञानिकता रहेको अर्कोथरीको मत छ । चाडपर्वको आप्mनै सौन्दर्य हुन्छ । यही सौन्दर्यले सामान्यरूपमा समाजलाई डो¥याइरहेको हुन्छ तथा समाजसित अनेक किसिमले सम्बन्ध बढाइरहेको हुन्छ । तर चाडपर्वमाथि आर्थिक पक्ष हावी हुन थालेदेखि यसको सम्पूर्ण प्रकृतिमाथि प्रभाव जमाउँदै गएको देखिन्छ । यसैले आर्थिक सम्बन्ध कमजोर बनाउँदै जाने पर्वहरू लोप हुँदै गए । हामीबाट के कस्ता पर्व लोप भए भन्ने यकीनसाथ अहिले भन्न सकिने अ
चाडपर्व र समाज शुद्धीकरण
हिन्दूहरूको साझा चाडपर्व दर्शै बित्यो र दीपावलीपनि बितेको छ । अब, हिजोको दिनमा तराईमा मात्र मनाइने रअहिले देशभरि प्रायः स्थानमा मनाउन थालिएको, छठको रमझम शुरू भएको छ । उखरमाउलो गर्मीको अवरोह र चीसोको आरोहण हुने सन्धिबेलामा यी सबै चाडहरू मनाइनुले हामीमा जलवायुप्रतिको चासोलाई व्यक्त गर्दछ । जलवायुप्रति हाम्रो संवेदनशीलता कति गहिरो थियो भन्ने कुरा हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसै बेला बुझेका थिए, जब जलवायुको प्रचण्डता अहिलेजस्तो थिएन । पहिले सम रहेको जलवायु अहिले विषम भएको छ, अहिले हामी बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर अहिलेजति असंवेदनशील हाम्रो समाज कहिले थियोजस्तो लाग्दैन । किनकि चाडपर्वहरूको सरोकार जति मौसमसँग छ, त्यति अन्य कुनै कुरासँग छैन । धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति त पछि कालक्रममा जोडिंदै गएका हुन् । मानिस बाध्य हुन्छ भनेर चाडपर्वहरूमा धर्मको चास्नी हालेको मात्र हो । वस्तुतः धर्म भनौं वा चाडपर्वहरू सबैको उद्देश्य मानिसलाई सुखी जीवन बिताउने शैली छनोट मात्र हो । कसलाई के मन पर्छ सोही मार्गमा हिंडेर आपूmलाई सुखी र खुशी पार्न सकोस् । हिन्दू धर्म वर्णाश्रम व्यवस्थामा टिकेको जीवनशैली हो ।
२०७६ कात्तिक १० गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइनको सर्भे शुरू, अमलेखगंज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने
प्रस, पथलैया, ९ कात्तिक/ नेपाल आयल निगमले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन निर्माणको योजना अघि ल्याएको छ । मोतिहारी–अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्पन्न भएपछि निगमले अर्को महŒवपूर्ण योजना ल्याएको हो । ग्यास पाइपलाइन मोतिहारीबाट चितवनको लोथरसम्म लगिनेछ । निगमले ग्यास पाइपलाइनसँगै अमलेखगंजसम्म ल्याइएको पेट्रोलियम पापलाइनलाई पनि लोथर पु¥याउने तयारी गरेको छ । दुवै योजना निर्माणका लागि निगमले सर्भेको काम शुरू गरेको छ । सङ्घीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले अमलेखगंजस्थित आयल निगमको क्षेत्रीय डिपोबाट शनिवार सर्भेको शुभारम्भ गरेका छन् । सर्भेको सुरुआत गर्दै मन्त्री यादवले इन्धन र ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण सहज बनाउन अर्को दुई महŒवपूर्ण योजना ल्याइएको बताए । मन्त्री यादवले पाइपलाइन विस्तारको कामलाई सरकारले क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने बताए । उनले अमलेखगंजबाट द्रुतमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले दुई योजनाको आन्तरिक काम भइरहे पनि सर्भेको
पकाहामैनपुरको तेस्रो गाउँपरिषद् बहुमतको आधारमा सम्पन्न
प्रस, पोखरिया, ९ कात्तिक/ विवाद र बहिष्कारका बीच पकहामैनपुर गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा बहुमतको आधारमा हिजो राति शुरू भएर आज बिहान सम्पन्न भएको छ। उपप्रमुख कुशमती देवीलगायत १५ जनाले हिजो डाँकिएको गाउँसभा बहिष्कारको घोषणा गरेपछि निर्धारित समयमा स्थगित भएको थियो । पछि केही सदस्यहरूसँगको छलफल सकारात्मक भएपछि राति १० बजे गाउँसभा बहुमतको आधारमा बोलाइएको र आज बिहान ३ बजे सम्पन्न भएको हो । २७ सदस्यीय गाउँसभामा प्रमुखलगायत १७ जना उपस्थित रहेका र उपप्रमुखलगायत १० जनाले मात्र बहिष्कार गरेको बुझिन आएको छ । आज बिहान सम्पन्न तेस्रो गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि रु ३३ करोड ९ लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ । गाउँसभामा प्रस्तुत सबै विधेयक तथा प्रस्ताव उपस्थित बहुमत सदस्यले पारित गरेको गापा प्रमुख विजय चौरसियाले बताए । गाउँसभा हुन नसक्दा लामो समयदेखि कर्मचारीले तलब खान सकेका थिएनन् भने विकासको काम पनि प्रभावित भएको थियो । गाउँपरिषद्ले कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको प्रमुख चौरसियाले बताए ।
बुनिलालको हत्या गोली हानेर ः अनुसन्धानमा अग्रवाल दम्पती पक्राउ
प्रस, वीरगंज, ९ कात्तिक/ वीरगंज महानगरपालिकाका अग्निनियन्त्रक वीरगंज–१६ नगवा निवासी ४० वर्षीय बुनिलाल चौरसियाको गोली हानी हत्या भएको पुष्टि भएको छ । नारायणी अस्पतालमा भएको शवको शल्यपरीक्षण रिर्पोटबाट यो कुराको पुष्टि भएको हो । शल्यपरीक्षणको क्रममा चौरसियाको शरीरबाट सानो हतियारको दुईवटा गोली निस्केपछि चिकित्सकहरूले गोली हानी हत्या भएको पुष्टि गरेका हुन् । प्रहरीले पनि गोली लागेको पुष्टि गरेको छ । मृतक चौरसियाको शरीरका पाँच ठाउँमा गोली प्रहार गरिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार चौरसियाको कन्चटमा एक गोली, छातीमा दुई गोली र पेटमा दुई गोली गरेर पाँचवटा गोली लागेको छ । प्रहरीले भने गोलीबाट हत्या भएको पुष्टि गरेपनि सङ्ख्या यकिन गर्न सकेन । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । आज बिहान भएको शल्यपरीक्षणको क्रममा पेटबाट दुईवटा गोली फेला परेको नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताए । शल्यपरीक्षणपछि परिवारजनले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै घण्टाघरमा एक घण्टा चक्काजाम गरेका थिए । एम्बुलेन्समा मृतकको शवसहित परिवारजन, टोलवासी, शुभचिन्तकहरूले हत्यारालाई पक्र
सुन महँगो भएपछि धन्तेरस प्रभावित गत वर्षको तुलना ५० प्रतिशत कारोबार घट्यो
प्रस, परवानीपुर, ९ कात्तिक/ गत वर्षभन्दा यसपालि दीपावलीमा सुनचाँदीको कारोबार उत्साहजनक हुन सकेन । गत वर्ष ५५ हजारदेखि ५७ हजार रुपैयाँसम्म एक तोला सुनको मूल्य हुँदा कारोबार उत्साहजनक भएको थियो । पोहोर साल करीब ४० किलोभन्दा बढी सुन दशैंदेखि छठसम्म एक महीनाको अवधिमा बिक्री भएको पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ पर्साले जनाएको थियो । यसपालि त्यति कारोबार नभएको सङ्घका महासचिव प्रवेश सर्राफले बताए । उनले सुन तोलाको रु ७१ हजार ७ सय र चाँदी रु ८ सय ८० को दरमा कारोबार भइरहेको बताए । १० ग्राम सुन ६१ हजार ४ सय ७० र चाँदी ७ सय ५४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा भारी मूल्यवृद्धिले ग्राहकहरूले सुनचाँदीका गहना किन्न हच्केको उनी बताउँछन् । उनले वीरगंजमा कुल २८७ वटा सुनचाँदी पसल सञ्चालनमा रहेकोमा मुख्य बजारमा रहेका सुनचाँदी पसलले बढी कारोबार र गल्लीका पसलले कम कारोबार गरेको प्रस्ट्याए । वीरगंजमा बढी कारोबार गर्ने पसलहरूमा नीरज इन्टरप्राइजेज प्रालि, बिके ज्वेलर्स, शुभ शाक्य ज्वेलर्सलगायतमा ग्राहकको भीडभाड बढी देखिएको थियो । ग्राहकहरूले धनतेरसको दिन सुनचाँदीका गहना बढी किन्ने परम्परा रह
असुरक्षित भएको भन्दै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू धर्नामा
प्रस, वीरगंज, ९ कात्तिक/ सुरक्षाको माग गर्दै नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले शनिवार पनि कलेजमा धर्ना दिएका छन् । कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित नेशनल मेडिकल कलेजको १८औं संस्करणका विद्यार्थीहरू बिहीवारदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले पछिल्लो समयमा आन्दोलनरत विद्यार्थी कलेज व्यवस्थापनबाटै असुरक्षित महसूस गरिरहेको बताए । उनीहरूले कलेजअगाडि शनिवार दिउँसो २ देखि साँझ ५ बजेसम्म धर्ना दिएका थिए । बिहीवार दिउँसो र राति कलेजले खटाएको समूहले कुटपिट गर्दै होस्टेलभित्र पसेर ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि त्रसित विद्यार्थीहरूले शुक्रवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सुरक्षा माग गरेका थिए । कलेज व्यवस्थापनबाट परिचालित व्यक्तिहरूबाट निरन्तर धम्की आइरहेकाले फेरि आक्रमण हुने त्रासले सुरक्षाको माग गर्दै कलेजअगाडि धर्ना दिएको विद्यार्थीहरूले बताए । कलेजमा सुरक्षा अवस्था विश्वसनीय नभएको र व्यवस्थापनसामु स्थानीय प्रशासन निरीह देखिएको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति र बढी शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूल